ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်က အကောင်လေးတစ်ကောင်ကို မွေးစားလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ကိုဗစ်ကာလစတင်ကတည်းက ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကြီးမှာ လတ်တလော တိရစ္ဆာန်မွေးစားနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိတာ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါနော်။ တိရစ္ဆာန်ယာယီမွေးစားခွင့်ကိုတော့ နိုင်ငံတော်တော် များများရဲ့ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွေမှာ လုပ်လေ့ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခုလိုကို ဗစ်ကာလမှ စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
တိချစ်သူတွေအနေနဲ့ ကျား၊ခြင်္သေ့၊ဆင်၊ ဝက်ဝံ၊ ဆင်၊ ပန်ဒါနီလေးတွေကို သုံးလ(သို့) ခြောက်လ မွေးစားခွင့်ရှိပြီး တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက် အစာအာဟာရကျွေးမွေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းတို့ ပါဝင်မှာပါ။ ကိုယ်မွေးစားလိုက်တဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးကိုလည်း အကြိမ်(၃၀) လာရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်လေးရဲ့ဝင်းရှေ့မှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကို ကမ္ဗည်းထိုးပေးထားဦးမှာပါ။
ဒီအစီအစဉ်လေးမှာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပထမဆုံးပါဝင်လာခဲ့သူကတော့ မင်းသားချောပိုင်တံခွန်ပါ။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တတ်သူပိုင်တံခွန်ကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့အချစ်တော်ဆင်မကြီး မိုမိုကို သုံးလမွေးစားခဲ့ကြောင်း ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ မျှဝေလာပါတယ်။ မနက်ဖြန်စက်တင်ဘာလ(၁၇) ရက်နေ့ကတော့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ မွေးနေ့မတိုင်ခင် အကြိုအလှူအနေနဲ့ ဆင်မကြီးမိုမို အတွက် သုံးလစာ အစစအရာရာ တာဝန်ယူပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အလှူလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Animal Adoption Program with Paing Takhon
တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တတ်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ကလည်း ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဥ်ရဲ့ Animal Adoption အစီအစဥ်ကို သဘောကျနှစ်သက်ပြီး ပါဝင်လှူဒါန်းထားပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်က ဘယ်အကောင်လေးကို Adopted လုပ်ထားလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် … (ဒီမှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ကောင်းစွာ လိုက်နာထားပြီး ပိုင်တံခွန်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးနေစဥ်အတွင်းသာလျှင် Mask ကို ယာယီဖြုတ်ထားပြီး Face Shield နဲ့ ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)Animal Lover Paing Takhon is also included in the Yangon Zoo's Animal Adoption program. Let's see which animal was adopted by Paing Takhon.(This video was filmed in accordance with the guidelines of the Ministry of Health and Sports and Paing Takhon temporarily removed the surgical mask and taken with Face Shield during the shooting program process.)#YangonZoo #AnimalAdoption
Posted by Yangon Zoo on Tuesday, 15 September 2020
Source – Paing Takhon, Yangon Zoo